China Dragon Boat Stainless Steel Sculpture Chinese Artistic Metal Miasa Ho an'ny Ivotoeram-bahoaka Decor orinasa sy mpanamboatra | Piedra
Sary sokitra vy vy vy miendrika vy izay miasa ho an'ny afovoany foibe ho an'ny daholobe
Model No: MES43
Ny sary sokitra stainless vy maoderina dia natao tamin'ny endri-borona dragona izay mandrakotra ny fomba sinoa nentim-paharazana. Ny sary sokitra metaly dia feno ny famoronana izay azo tazonina ho Fihaonambe Center Public. Azonao jerena avy amin'ny sary fa ilay sambo sambo amin'ny volana. Hevitra lehibe iray fa mifangaro miaraka ireo sary sokitra vy tsy misy fangarony sy ireo singa fety nentim-paharazana. Raha ny fomban'ny Dragon Boat Festival dia fetibe nentim-paharazana sinoa, fa ny hazakazan'ny sambo dragona dia fomba amam-panao efa ela an'ny Dragon Boat Festival. Hankalaza ity andro ity ny olona amin'ny alàlan'ny hetsika nentim-paharazana. Ary ny akora vy matevina dia manana kalitao tsara indrindra, izay ho voatahiry tsara aorian'ny fipoahan'ny rivotra sy ny orana taona maro. Izany no antony mahatonga ny olona maro kokoa hisafidy ny sary sokitra vy ho sary sokitra haingon-trano ivelany.
Anarana amin'ny zavatra
Dragon Boat ivelany sary sokitra Metal Art Design
Zavamaniry vita amin'ny volana sy alikaola
Volafotsy sy mena
1,8 m na 2m
Afaka manao sary sokitra natokana ho anao izahay
Sary sokitra vita amin'ny vy shinoa
Sary sokitra anatiny
Xiamen, Fujian, Sina
Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sary sokitra sy ny fanamboarana. Mino izahay fa ny sanganasa manana kalitao avo lenta dia azo vokarina amin'ny alàlan'ny fandraisan'anjaran'ireo mpanjifa mavitrika - manomboka amin'ny famolavolana hevitra, famolavolana ka hatramin'ny famokarana. Ny ekipanay manam-pahaizana manokana dia hiantoka tsara ny dingana tsirairay sy ny fanatanterahana azy. Rehefa vita izany dia ho hitan'ny ekipanay ny famonosana sy ny fandefasana azy araka ny tokony ho izy ka mahatratra ny toerana alehanao soa aman-tsara. Miresaka aminay, tianay ny maheno anao!
1. Alefa any amin'ny seranan-tsambo Xiamen any amin'ny faritanin'i Fujian ny ankamaroany na lazao aminay ny zavatra takinao manokana.
2. Amin'ny alàlan'ny ranomasina no lalana fanaterana anay indrindra.
3. Ny entana fandefasana dia miankina amin'ny lanjany sy ny goba an'ny vokatra nalefa. Mitanisa ny entana mivantana avy amin'ny orinasan-tsambo izahay.
4. Fotoana fitaterana amin'ny toerana samihafa ary ampahafantaro anay ny seranan-tsambonao amin'ny tanàna eo an-toerana. Raha ny momba ny toerana voafaritra manokana, dia andefaso mailaka izahay, hodinihintsika miaraka amin'ny orinasa fandefasana.
1.Moa mangataka santionany aminao ve aho?
Azo antoka, mifandraisa aminay mba hahazoana santionany. Saingy tsikaritrareo fa mila mandoa santionany sy maneho vidiny ianao.
2. Azoko fantarina ve ny antsipirihany baiko ao amin'ny fizotran'ny famokarana amin'ny fotoana rehetra?
Hanomboka hanao izany izahay taorian'ny nanamafisanao ny fitaovana sy ny famolavolana.
Isaky ny dingana rehetra amin'ny famokarana, ny fonosana ary ny fitaterana dia hampita aminao ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fandrosoana.
3. Afaka manome serivisy vy vita amin'ny vy azo atolotra ve ianao?
Eny, azonay atao, azafady, mifandraisa aminay miaraka amin'ny sarinao na hevitrao momba ny lamina, ny fomba, ny loko ary ny fitaovana ho anay, ireo mpamorona matihanina dia hanampy amin'ny fanovana ny toetranao ho tena izy.
Previous: Drafitra fanodinodinam-bolan'ny tanàna ankehitriny momba ny sary sokitra vita amin'ny metaly vita amin'ny loko sy vita amin'ny loaka
Manaraka: Taratasy kanto vita amin'ny metaly metaly sokitra vy nolokoana loko mena ho an'ny haingon-trano
Sary sokitra vita amin'ny metaly Yard Miaraka amin'ny endrika famoronana biby biby
Sarivongana zaridaina maoderina
Metal Art Letters Stainless Steel Sculpture Pai ...
Koban-kazo vita amin'ny hazo vy any ivelany lehibe ...
Drafitra fanoratana metaly lehibe ...